कलाकारको वैवाहिक जिन्दगी, यो कस्तो सम्वन्ध !-Nagarikaawaj.com
कलाकारको वैवाहिक जिन्दगी, यो कस्तो सम्वन्ध !
‘कस्तो मिलन भयो हाम्रो दोवाटोमै छुट्नुपर्ने’ …।
चर्चित गायीका अञ्जु पन्तले कोशेढुङगा एल्वमका लागी गाएको यो गीत पछि गएर आफ्नै जीवनमा लागू भयो । त्यसो त यहि गीतमा संयुक्त आवाज दिएका अञ्जुका पुर्वपति मनोजराजको जिन्दगीमा पनि यहि गीतले निकै महत्व राखेको छ । अञ्जु र मनोज एक समय निकै चलेका संगितका हस्ती हुन् । अञ्जु अझैपनि लगभग एकछत्र राज गरेकी छिन भन्न सकिन्छ । उनको आवाज र उनले गाएका गितहरु अझै पनि नेपाली मिडियामा कम भएका छैनन । मनोज पनि पछिल्ला समय मिडियामा छाइरहेका छन । उनले पछिल्लो पटक गाएको गीत ‘पानिको फोका जस्तै भयो हाम्रो मायाँ, नचाहा“दा नचाहादै छुट्यो हाम्रो मायाँ’ ले मनोजको नाम र कामको उचाई पनि थप माथी थपेको छ ।
तर, गीतमा जस्तै मनोजले आफ्नो पछिल्ला जीवनको विषयमा डुवेको टिप्पणी धेरैले गरेका छन् । हाल मनोज पुतलीसडक स्थित एक संगीतालयमा संगीत पढाउदै यहि क्षेत्रमा अगाडी बढेका छन् भने अञ्जु पनि आफ्नो वाटो आफ्नी छोरी संगै यहि क्षेत्रमा लागि परेकी छन् ।उनिहरु अहिले आ आफ्नो वाटोमा छन । एक्लै एक्लै छन । अन्जु देशविदेशका कार्यक्रममा व्यस्त छन, मनोज पनि आफ्नो काममा उत्तिकै व्यस्त ।
नायीका मनिषा कोईरालाले आफ्ना पतिसँग एकवर्ष सम्म पनि आफनो सम्वन्ध कायम राख्न सकिनन । सचांरमाध्यममा आएको खवर अनुसार पति सम्राट दाहालसँग केही महिना अघि सम्वन्ध विच्छेद गरेकी हुन् । झण्डै ४ वर्षअघि निकै नै तामझामका साथ विवाह गरेकी मनिषाको दाम्पत्य जिवन छोटो अवधीमै टुट्न पुग्नुको कारण यि दुईलाई वाहेक कसैलाई थाहा छैन । २०६७ साल असारमा आफु भन्दा ६ वर्ष कान्छा पर्यावरण इन्जिनियर सम्राट दाहालसग मनिषाले अति हर्षोल्लासका साथ विवाह गरेकी थिईन । सम्राट र मनिषाको विवाह भएको केही महिना पछि नै दाम्पतीबीच सम्वन्ध चिसीदै गएको पाईएको थियो ।
त्यसो त झण्डै १० वर्षसम्म सँगै वसेका चर्चित कलाकारहरु छविराज ओझा र नायीका रेखा थापाको सम्वन्ध छुटेको पनि केही वर्ष मात्रै भएको छ । उनिहरुका समाचारले नेपालको चलचित्र क्षेत्रमा र मिडियामा निकै प्राथमिकता पायो । तर सम्वन्ध छुट्यो भन्ने उनिहरु मिडीयामा आएजस्तो त्यसरी छुटिसकेको भने पाईएको छैन । काम पर्दा भेटघाट गर्छन, निरन्तर कुराकानी हुन्छ, छविले रेखा काम गर्दैगरेको चलचित्रको बारेमा जान्न चाहान्छन्, परेको वेलामा ज्यानै दिएर सहयोग पनि गर्छन । आखिर किन हुन्छ, मिडियामा छुट्यो सम्वन्ध भन्ने, यथार्थतामा त्यस्तो नहुने । उनिहरुको सम्वन्धको बारेमा राम्रोसँग जानकारी भएका केही कलाकारहरु भन्छन्, –‘ न छुट्टीन सक्ने, न सँगै वस्न सक्ने उहाँहरुको बानि वुझ्नै सकिएको छैन ।’ तर नायीका रेखाको सम्वन्ध अहिले एक चलचित्र क्षेत्रकै व्यक्तीसँँग रहेको पनि वुझ्नमा आएको छ ।
नेपाली कला क्षेत्रको कथापनि अचम्मको छ । कहिलेकाहि दर्शकलाई कलाकारको रियल लाइफ र रिल लाइफ छुटाउन निकै हम्मे हम्मे पर्छ । हम्मे पर्नु पनि ठीकै हो । रिल लाइफका कुरा हुवहु रियल लाइफमा मिलेपछि दर्शक अलमलमा पर्नुलाई कुनै अनौठो कुरा मार्नु पर्दैन । अभिनय र गीत संगीतमार्फत कहिले मिलन र कहिले विछोडका कहानी प्रस्तुत गर्ने नेपालको कला क्षेत्रमा राज गरिराखेकाहरु कति कलाकारका जिन्दगी पनि त्यस्तै छन् । त्यसमा पनि प्रेम, विवाह र पारपाचुके त सबैभन्दा मिल्ने कुरा नै हो । अन्जु पन्त, छविराज ओझा अथवा रेखा थापा होस् कि मनोज राज ।
नेपालका चचिर्त नायक भुवन केसीकै कुरा गरौंन । उनले पहिलो श्रीमतीलाई छोडेर दास्रो पटक नायिका सुस्मिता लामास“ग बिहे गरे । तर उनको यो सम्बन्ध पनि लामो समयसम्म टिक्न सकेन । जसोतसो लम्विदै आएको सम्बन्ध अन्ततः अदालतमा गएर धुजाधुजा भएर नै छोड्यो । यी नायक सुस्मितासँग सम्बन्ध सुधार गर्नु साटो अर्कोको श्रीमतीलाई गर्ल फ्रेन्ड भनेर हिड्दा कुटाइ पनि खाए । दुईवटा श्रीमती बिहे गरेपछि पनि तेस्रो श्रीमती भित्रयाउने सुरमा रहेका भुवन साच्चीकै यो मामिलामा खेलाडीनै हुन भन्छन उनलाई नजिकवाट चिन्नेहरु । नायीका जिया केसीसँगको सम्वन्ध पछिल्लो समय राम्रो हुदै गएको हल्लाले पनि अव भुवन विवाह गर्छन कि भन्ने हल्ला पनि छ यहाँ चलचित्र वजारमा ।
केही कलाकारको अभिनय वास्तविक जिन्दगीमा पनि त्यतिकै बिजोगै छ । विवाह लगत्तै सन्तान जन्माएकी संचिता लुइ“टेलकै कुरा पनि यहाँनिर राखौंन । परिवारको निर्णयभन्दा बाहिर गएर आकाश शाहस“ग अन्तरजातीय प्रेम विवाह गरिन् । तर जल्दोबल्दो नायक निखिल उप्रेतीस“ग फिल्म सुटिङ गर्दागर्दै वास्तविक जीवनमै मन पराउन थालेपछि आकाशलाई डिभोर्स दिएर पहिलै रियल लाइफमा एउटा श्रीमती भएका निखिलस““ग विवाह गरिन् । एकता कि निकै चर्चित नायिका तथा अभिनेत्री गौरी मल्लले पनि राजन भण्डारीस“ग प्रेम विवाह गरेकी थिइन् । तर उनले पनि साथ निभाउन सकिनन् यो जोडी पनि सम्बन्ध विच्छेदमै गएर समाप्त भयो । अमेरिका गएर शरदकुमार रिमालस“ग विवाह बन्धनमा बा“धिएकी नायिका जल शाहको पनि सम्बन्ध धमिलिने गरेको हल्ला बेला–बेला चलिरहेको थियो ।
यी उदाहरण मात्रै हुन । नेपाली कला क्षेत्रमा दाम्पत्य जिवन सफल भएका कलाकारहरु अलिकति कम देखिन्छन । दाम्पत्य जिवन राम्रो भएको भनिएका कलाकारहरु पनि उनिहरुको सम्वन्ध सोचेको जस्तो राम्रो छैन । आखिर किन यस्तो हुन्छ त ?, भ्रखरै रिलीजमा आएको चलचित्र ‘माई वेष्ट फ्रेण्ड’ का निर्देशक प्रशन्न पौडेल भन्छन्, –‘नेपालको कला क्षेत्र मात्रै हैन, हलिउड, वलिउड जताततै त्यस्तै छ, नेपालको कला क्षेत्रको कुरामा एकले अर्कालाई वुझ्न नसक्नुनै पहिलो कारण हो ।’ अर्को कारण भनेको कला क्षेत्र त्यस्तो क्षेत्र हो जहाँ दिनरात नायक होस् कि नायीकासँग नजिक हुनुपर्छ, हुदाहुदै नसोचेको मान्छेसँग वढि नजिक भईन्छ । अलिकति वढि केयरलेस हुदाँपनि नेपालको कला क्षेत्र सहि तरिकाले अगाडी वढ्न नसकेको धेरैको वुझाई छ । मात्रै मोज मस्ती सोच्दा यस्तो हुन पुगेको हो भन्नेहरु पनि कमि छैनन । त्यही भएकैले पनि हुन सक्छ, अझै पनि भन्ने गरिएको छ, कला क्षेत्रमा गईयो भने जिवन वर्वाद हुन्छ ।
नायीका सिम्पल खनालको पनि नपालका एक चर्चित निर्देशकसँग सम्वन्ध विच्छेद भएको थियो । तर अहिले उनि एक्ली छिन । सो सिम्पल चलचित्र गरेकी उनी उक्त चलचित्र सोचे जस्तो सफल नभएपछि मात्रै म्युजिक भिडीयोमा सिमीत छिन । उनका श्रीमानका अनुसार, सिम्पल खनालले कहिल्यै आफ्नो व्यथा नवुझ्न्े गरेको कारण सम्वन्ध विच्छेद भएको हो ।
सिम्पल जस्तै नेपालकी एक चर्चित गायीका मन्जु पौडेल पनि वैवाहिक जिवन असफल भएका कलाकारहरुको सुचिमा पर्छिन । उनलाई विवाहको वारेमा सोध्नेहो भने कुरा गर्न मान्दिनन । किन त्यस्तो गर्छिन त ?, उनका श्रीमान भन्छन्, –‘मन्जु आफ्नै कारण यस्तो भएको हो, उनि आउँछीन भने म सधै स्विकार्नेछु । एक छोरीकी आमा समेत भएकी मन्जुका श्रीमान अत्याधिक मायाँ गर्छन । दिनरात मन्जुकै वारेमा सोध्ने र चासो राख्ने मन्जुका श्रीमानले नेपाली कला क्षेत्रमा सम्वन्ध वन्ने र भत्कने प्रमुख कारणनै एकअर्कालाई नवुझ्नुको कारण हो भन्छन । यद्यपी मन्जुको आफ्ना श्रीमानसँग न सम्वन्ध छ, न त छुटिसकेका छन ।
नायीका सुमिना घिमीरेको पहिलो विवाह भत्किएपनि एक्लै रहेको कुरा पनि मिडीयामा आएको छ । यदपी उनले यसलाई अस्विका गर्छिन । अमेरिका पलायन गायिका सपनाश्रीले पनि सात वर्È लामो प्रेमपछि गरेको विवाहलाई निरन्तरता दिन नसकेर कानुनी रुपमा बिदा गरिदिइन् ।
मोडल, नायिका तथा गायिका पूजा लामाले गायक डिजेस“गको सेक्स भिडियो बजारमा आए पछि हतारहतार डिजेसँग बिहे गरिन् । तर त्यो सम्बन्ध एक महिनाभन्दा पर गएन । यस्तै अदालतको ढोकामा पुगेर पति पत्नीको सम्बन्धलाई सधैंको लागि निमोठ्ने नायिका मौसमी मल्ल लामो समयदेखि एक्लै बस्दै आएकी छन् । एक ताकि चर्चित नायिका पूजा चन्दले सुरज चन्दलाई सम्बन्ध विच्छेद गरेर अमेरिका पलाएन भएकी छन् । दर्जनौं टेलिफिल्म खेलेकी सिरु विष्टको वैवाहिक सम्बन्ध एउटा छोरा भएपछि पनि पानीपानी भएको छ । त्यस्तै प्रेम विवाह गरेकी नायिका सौजन्य सुब्बाको सिरोज घिमिरेस“गको जिन्दगीको पनि यात्रा लम्बिन सकेन ।
नेपालको कला क्षेत्रनै गज्जवको छ । त्यो गायन पेशामा लागेको होस्, चलचित्र क्षेत्रमा लागेको होस् कि कुनै क्षेत्रमा । कला क्षेत्रमा लागेका कलाकारहरु धेरैको सम्वन्धको वारेमा भित्रैदेखी वुझ्नेहो भने अचम्मको छ । मानौं, आजभोलि डिभोर्स भन्ने कुरा हरेकलाई सामान्य भएको छ । एक पछि अर्को श्रीमानसँग विवाह गर्नु, अर्को श्रीमतीसँग विवाह गर्नु अथवा एक जिवनसाथीपछि अर्कोसँग लसपस गर्नुलाई सामान्य रुपमा लिन थालिएको छ । अझ भनौं, हतारमा बिहे गर्ने फुर्सदमा डिभोर्स गर्ने भन्नेजस्तै भएको छ ।
पैसा कमाउनेले कमाईरहेको छ । खर्च गर्नेले गरिराखेको छ । मोज मस्ती गर्नेले गरिराखेको छ । विवाह भयो भने के चाडनै हुख्छ । भएन भने जस्तै राजेश हमालको पनि । यो क्षेत्रमा आउने कलाकारहरु आफै भन्छन् कहिले घरमा श्रीमान ठुस्स पर्ने । कहिले श्रीमती ठुस्स पर्ने । न छाड्न सकिन्छ, न यहि क्षेत्रमा वाच्न सकिन्छ । नेपालको कला क्षेत्रमा लाग्ने पुरै व्यक्तीहरु यस्तो समस्यावाट ग्रसित छन भन्ने हैन । तर अधिकासंमा यस्तो पिडाले पल पलमा सताउने गरेको पाईएको छ । उदाहरणमा माथी दिईएका भन्दा वाहेक धेरै कलाकारहरु पनि त्यस्ता खालका समस्यावाट पिडीत हुदै आएका छन । नायक तथा निर्देशक मनोज श्रेष्ठले यो क्षेत्रमा अवको दुईवर्षसम्म सोचेजस्तो सफलता हात नपरे च्यात्तै छाड्ने वताउँछन । दैनिकपत्रसँगको कुराकानीमा उनले भने, –‘यत्तिका वर्षसम्म लागियो, धन्न श्रीमती थिईन उनको कमाईले घरपरिवार चलेको छ नत्र वर्वाद हुनेथियो ।’ उनको दाम्पत्य जिवन राम्रोसँग चलेपनि कमाई नहुने र सोचेजत्ति अगाडी नवढेको कुरा भने स्विकार्छन ।
नेपाली कलाकारिता क्षेत्रका धेरै उदाहरणहरु छन । प्रेमको नाटक गर्ने, बिहे गर्ने फेरि सम्बन्धलाई दुई किनारा लगाउने सामान्य जस्तै भएको छ । त्यही भएकैले पनि होला, दर्शक श्रोतालाई पनि वास्तविक जिन्दगी कुन हो भनेर छुट्याउन गाह्रो परेको छ । हुन त मनै नमिलेपछि रातो दिन कुटामारी गरेर साथ बस्नुको के अर्थ छ ? तर केही हदसम्म पनि सम्भौता गर्न नसक्नुले चाहि“ भविष्यमा एकजनाले कतिचोटि बिहे र कतिचोटि सम्बन्ध विच्छेद गर्ने हो त्योचाहि“ हेर्न बा“की नै छ ।